Living Square Co., ltd Job openings in Myanmar | Work.com.mm
Living Square Co., ltd
View4Available Jobs
Ma Har Si Sasana Yeik Thar Street , Bahan Township. No.1
Denyo, Yamaha, Kanebo, Pupa, Police အစရှိသော Product များကို တင်သွင်းအောင်မြင်နေသည့် Ever Seiko Co., Ltd. ၏ Living Product များကို သီးခြားဖြန့်ဖြူး ရောင်းချမည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ် Living Square ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် Lazboy, Electrolux, Italsofa မှမစပြု၍ Livi ng Product များကို အောင်မြင်စွာ တင်သွင်းရောင်းချလျက်ရှိပြီး၊ ကမ္ဘာကျော် အမှတ်တံဆိပ် အများ အပြား၏ Regional Distributer အဖြစ် ကမ်းလှမ်းမှုများ ရရှိထားသည်။
လက်ရှိတွင် ရန်ကုန်မြို့တွင်ရှိသော Head Office အပြင် မန္တလေး၊ တောင်ကြီး၊ လားရှိုးမြို့များတွင် ရုံးခွဲများ၊ Showroom များ ဖွင့်လှစ်ထားသည်။
High quality products will contribute quality infrastructure, safety life and upgradedsociety.
Responsibilities and after-sales services to achieve customers’ reliance.
Quick supports and solutions for the products are values of us.